‘टिकटक क्विन’ रेश्माको विवाहमा वर्षाको रमाइलो, को को पुगे विराटनगर ? - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / ‘टिकटक क्विन’ रेश्माको विवाहमा वर्षाको रमाइलो, को को पुगे विराटनगर ?
‘टिकटक क्विन’ उपनामले परिचित नायिका तथा मोडल रेश्मा घिमिरेले सोमबार विवाह गरेकी छन् । उनले एक वर्ष अगाडि नै इन्गेजमेन्ट गरेकी थिइन् । प्रेमीसंग एक वर्ष अघि नै विवाह निश्चित गरेकी उनले सोमवार विवाह गरेकी हुन् । उनको विवाह अमेरिकामा बस्दै आएका प्रभात बाबुसँग भएको हो ।
रेश्मा र प्रभातको विवाह विराटनगरको एक रिसर्टमा भएको हो। उनको बिवाहमा आफन्त, परिवार, साथीभाइ र केही चलचित्रकर्मी उपस्थिति भएका छन्। नायिका वर्षा राउत रेश्मालाई शुभकामना दिन विराटनगर पुगेकी छन्। वर्षा र रेश्मा नजिकका साथी हुन्। प्रताप दास पनि उनको विवाहमा सहभागी भएका थिए। रेश्माले गत वर्ष अमेरिकामा रहेका प्रभातसँग इन्गेजमेन्ट गरे पनि कोभिडका कारण विवाह हुन सकेको थिएन। रेश्माका श्रीमान् प्रभात अमेरिकामा रहेर चिकित्सा विज्ञानको अध्ययन गरिरहेका छन्।
विराटनगरमा नियमित हुँदै आएको मिस पूर्वेली सुपर मोडलको बिजेता समेत रहेकी रेश्मा र प्रभातबीच लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको नजिकका आफन्तको भनाई छ । उनका श्रीमानको स्थायी घर भने काठमाण्डौमा रहेको छ । रेश्मा भने विराटनगर निवासी हुन ।